ရဲနည်| October 10, 2012 | Hits:9,503
စစ် အာဏာသိမ်း ၂၆ နှစ်အလွန် အိမ်ပြန်လမ်းအစိုးရ နှင့် KNU/KNLA-PC တပ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် တားမြစ်ချက်များ ပေးပို့အစိုးရ ခေါင်းဆောင်နေရာ စစ်ခေါင်းဆောင်တို့ အတွက်သာစကော့တလန် လွတ်လပ်ရေး၏ အဖိုးအခစောမူတူးစေးဖိုး ဘာမှားလို့လဲ
Maung Kyaw October 10, 2012 - 2:31 pm ၁ နဲ့ ၃ က ဘောကျော်ကိုမထောက်ခံဘူးလို့ ..ဘယ်သူကဘာကြောင့်ပြောနိုင်ရတာလဲ။၆၊ ၄၊ ၇ ကဓါတ်ပျက်နေတာကြာလှပြီ။
Reply Johnny Lynn October 10, 2012 - 6:57 pm အရေးပေါ်ညီလာခံတစ်ခုကိုခေါ်ယူပြီး အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းသင့်ပါကြောင်းပါခင်ဗျာ Reply saw soe October 10, 2012 - 11:37 pm I wounder who is ye ni. I got the smell of SPDC.
Reply Ohnmar Kyaw October 12, 2012 - 3:40 pm ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးက တိုင်းသူပြည်သားတွေကောင်းစားတာမလို့ချင်တော့သူလုပ်တဲ့နည်းတစ်
ကိုဘဲအလုပ်ရှုပ်နေကြတာပေါ့။ဒါမှငရဲပြည်မှာမြန်မာလူမျိုးများများရှိမှနတ်ဆိုးကပျော်မှာလေ။အော်ဒုက္ခဒုက္ခ.. Reply Zau Hkun October 16, 2012 - 7:30 am သုံးနေကြရှေးရိုးစွဲတိုင်းရင်းသားအခြင်းခြင်းသွေးခွဲနည်းလမ်းစဉ်အတိုင်းဘာဘဲ အဲဒီလမ်းစဉ်မသုံးဘဲသူတို့ရဲ့နည်းဗျူပာာဘယ်လိုမှမအောင်မြင်နိင်ဘူး တိုင်းရင်းသားတွေသိသိကြီးနဲ့ခံနေမှာလား
Reply Etler October 21, 2012 - 1:22 pm For all Karen people, “it doesn’t matter who you are but whose you are”
Reply sunny October 24, 2012 - 4:48 pm KNU ကွဲတော့ကောင်းတာပေါ့…တိုင်းပြည်အတွက်တစ်ရန်အေးသွားတာပေါ့…ဒီကောင်တွေ